Bitootessa 26 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti
qorannoo laboraatoorii 1023 gaggeefameen namoonni 395 vaayirasii koronaan qabamuu 157 vaayirasicha irraa dandamachuu fi 9 lubbuun darbuu mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 291785 gaggeefameen namoonni 30241 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 25964 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 320 lubbuun darbanii jiru.
Bitootessa 24 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti
qorannoo laboraatoorii 911 gaggeefameen namoonni 318 vaayirasii koronaan qabamuu 154 vaayirasicha irraa dandamachuu fi 1 lubbuun darbuu mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 290088 gaggeefameen namoonni 29659 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 25579 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 310 lubbuun darbanii jiru.
Bitootessa 23 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti
qorannoo laboraatoorii 760 gaggeefameen namoonni 242 vaayirasii koronaan qabamuu 158 vaayirasicha irraa dandamachuu fi 3 lubbuun darbuu mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 289177 gaggeefameen namoonni 29341 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 25425 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 309 lubbuun darbanii jiru.
Bitootessa 22 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti
qorannoo laboraatoorii 469 gaggeefameen namoonni 173 vaayirasii koronaan qabamuu 192 vaayirasicha irraa dandamachuu fi 3 lubbuun darbuu mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 288417 gaggeefameen namoonni 29099 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 25267 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 306 lubbuun darbanii jiru.
Bitootessa 21 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti
qorannoo laboraatoorii 522 gaggeefameen namoonni 204 vaayirasii koronaan qabamuu 306 vaayirasicha irraa dandamachuu fi 3 lubbuun darbuu mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 287948 gaggeefameen namoonni 28926 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 25075 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 303 lubbuun darbanii jiru.
Bitootessa 20 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti
qorannoo laboraatoorii 610 gaggeefameen namoonni 183 vaayirasii koronaan qabamuu 236 vaayirasicha irraa dandamachuu fi 5 lubbuun darbuu mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 287426 gaggeefameen namoonni 28722 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 24769 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 300 lubbuun darbanii jiru.
Bitootessa 19 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti
qorannoo laboraatoorii 760 gaggeefameen namoonni 202 vaayirasii koronaan qabamuu fi 288 vaayirasicha irraa dandamachuun mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 286816 gaggeefameen namoonni 28539 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 24533 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 295 lubbuun darbanii jiru.
Bitootessa 18 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti
qorannoo laboraatoorii 494 gaggeefameen namoonni 253 vaayirasii koronaan qabamuu , 308 vaayirasicha irraa dandamachuu fi 2 lubbuun darbuu mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 286056 gaggeefameen namoonni 28337 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 24245 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 295 lubbuun darbanii jiru.Top of Form
Bitootessa 17 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti
qorannoo laboraatoorii 720 gaggeefameen namoonni 210 vaayirasii koronaan qabamuu , 306 vaayirasicha irraa dandamachuu fi 1 lubbuun darbuu mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 285562 gaggeefameen namoonni 28084 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 23937 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 293 lubbuun darbanii jiru.
Bitootessa 16 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti
qorannoo laboraatoorii 763 gaggeefameen namoonni 204 vaayirasii koronaan qabamuu , 363 vaayirasicha irraa dandamachuu fi 3 lubbuun darbuu mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 284842 gaggeefameen namoonni 27880 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 23631 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 292 lubbuun darbanii jiru.
Bitootessa 15 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti
qorannoo laboraatoorii 465 gaggeefameen namoonni 199 vaayirasii koronaan qabamuu , 276 vaayirasicha irraa dandamachuu fi 5 lubbuun darbuu mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 284079 gaggeefameen namoonni 27676 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 23268 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 289 lubbuun darbanii jiru.
Bitootessa 14 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti
qorannoo laboraatoorii 393 gaggeefameen namoonni 131 vaayirasii koronaan qabamuu fi 31 vaayirasicha irraa dandamachuun mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 283614 gaggeefameen namoonni 27477 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 22992 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 284 lubbuun darbanii jiru.
Bitootessa 12 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti
qorannoo laboraatoorii 437 gaggeefameen namoonni 115 vaayirasii koronaan qabamuu, 200 vaayirasicha irraa dandamachuu fi 1 lubbuun darbuu mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 281746 gaggeefameen namoonni 27127 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 22451vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 283 lubbuun darbanii jiru.
Bitootessa 9 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti
qorannoo laboraatoorii 644 gaggeefameen namoonni 244 vaayirasii koronaan qabamuu, 26 vaayirasicha irraa dandamachuu fi 2 lubbuun darbuu mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 280504 gaggeefameen namoonni 26663 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 21362 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 277 lubbuun darbanii jiru.
Bitootessa 7 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti
qorannoo laboraatoorii 325 gaggeefameen namoonni 133 vaayirasii koronaan qabamuu, 25 vaayirasicha irraa dandamachuu fi 1 lubbuun darbuu mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 279410 gaggeefameen namoonni 26284 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 21317 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 274 lubbuun darbanii jiru.
Bitootessa 6 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti
qorannoo laboraatoorii 326 gaggeefameen namoonni 69 vaayirasii koronaan qabamuu fi 15 vaayirasicha irraa dandamachuun mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 279085 gaggeefameen namoonni 26151 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 21292 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 273 lubbuun darbanii jiru.
Bitootessa 5 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti
qorannoo laboraatoorii 320 gaggeefameen namoonni 160 vaayirasii koronaan qabamuu fi 10 vaayirasicha irraa dandamachuun mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 278759 gaggeefameen namoonni 26082 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 21277 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 273 lubbuun darbanii jiru
Bitootessa 2 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti
qorannoo laboraatoorii 549 gaggeefameen namoonni 115 vaayirasii koronaan qabamuun mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 277421 gaggeefameen namoonni 25695 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 21208 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 265 lubbuun darbanii jiru.
Guraandhala 24 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti
qorannoo laboraatoorii 449 gaggeefameen namoonni 113 vaayirasii koronaan qabamuu, 36 vaayirasicha irraa dandamachuu fi 1 lubbuun darbuu mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 273875 gaggeefameen namoonni 24909 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 21025 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 261 lubbuun darbanii jiru.
Guraandhala 23 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti qorannoo laboraatoorii 766 gaggeefameen namoonni 136 vaayirasii koronaan qabamuu fi 53 vaayirasicha irraa dandamachuun mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 273426 gaggeefameen namoonni 24796 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 20989 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 260 lubbuun darbanii jiru.
Guraandhala 21 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti qorannoo laboraatoorii 807 gaggeefameen namoonni 127 vaayirasii koronaan qabamuu mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 272494 gaggeefameen namoonni 24572 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 20877 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 259 lubbuun darbanii jiru.
Guraandhala 18 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti qorannoo laboraatoorii 461 gaggeefameen namoonni 60 vaayirasii koronaan qabamuu , 37 vaayirasicha irraa dandamachuu fi 2 lubbuun darbuu mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 270901 gaggeefameen namoonni 24266 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 20813 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 254 lubbuun darbanii jiru.
Guraandhala 17 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti qorannoo laboraatoorii 286 gaggeefameen namoonni 70 vaayirasii koronaan qabamuu fi 54 vaayirasicha irraa dandamachuun mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 270440 gaggeefameen namoonni 24206 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 20776 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 252 lubbuun darbanii jiru.
Guraandhala 16 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti qorannoo laboraatoorii 280 gaggeefameen namoonni 56 vaayirasii koronaan qabamuu, 89 vaayirasicha irraa dandamachuu fi 2 lubbuun darbuu mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 270154gaggeefameen namoonni 24136 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 20722 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 252 lubbuun darbanii jiru.
Guraandhala 14 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti qorannoo laboraatoorii 759 gaggeefameen namoonni 120 vaayirasii koronaan qabamuu, 28 vaayirasicha irraa dandamachuu fi 1 lubbuun darbuu mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 269608 gaggeefameen namoonni 24000 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 20594 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 249 lubbuun darbanii jiru.
Guraandhala 11 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti qorannoo laboraatoorii 534 gaggeefameen namoonni 75 vaayirasii koronaan qabamuu, 38 vaayirasicha irraa dandamachuu fi 1 lubbuun darbuun mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 267793 gaggeefameen namoonni 23703 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 20499 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 247 lubbuun darbanii jiru.
Guraandhala 10 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti qorannoo laboraatoorii 394 gaggeefameen namoonni 51 vaayirasii koronaan qabamuu, 16 vaayirasicha irraa dandamachuu fi 1 lubbuun darbuun mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 267259 gaggeefameen namoonni 23628 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 20461 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 246 lubbuun darbanii jiru.
Guraandhala 9 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti qorannoo laboraatoorii 160 gaggeefameen namoonni 61 vaayirasii koronaan qabamuu, 12 vaayirasicha irraa dandamachuu fi 1 lubbuun darbuun mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 266865 gaggeefameen namoonni 23577 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 20445 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 245 lubbuun darbanii jiru.
Guraandhala 7 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti qorannoo laboraatoorii 686 gaggeefameen namoonni 80 vaayirasii koronaan qabamuu, 23 vaayirasicha irraa dandamachuu fi 1 lubbuun darbuun mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 266327 gaggeefameen namoonni 23442 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 20426 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 242 lubbuun darbanii jiru
Guraandhala 4 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti qorannoo laboraatoorii 444 gaggeefameen namoonni 88 vaayirasii koronaan qabamuu fi 17 vaayirasicha irraa dandamachuun mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 264825 gaggeefameen namoonni 23228 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 20382 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 239 lubbuun darbanii jiru.
On February 10, 2021/Guraandhala 3/2013 in Oromia, 598 laboratories have been conducted in 24 hours, 71 people have been infected with corona virus and 22 have been confirmed.
So far, 264381 laboratories have been conducted and 23140 people have been infected with corona viruses and 239 have passed away
In February 9, 2021/ Guraandhala 2, 2013, 336 laboratory studies have been conducted in the past 24 hours, 72 people have been infected with corona virus, 21 has been confirmed to be infected with 1 lives
So far, 263783 laboratories have been conducted and 23070 people have been infected with corona viruses and 239 have passed away.
Guraandhala 1 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti qorannoo laboraatoorii 348 gaggeefameen namoonni 99 vaayirasii koronaan qabamuu, 24 vaayirasicha irraa dandamachuu fi 1 lubbuun darbuu mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 263447 gaggeefameen namoonni 22998 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 20322 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 238 lubbuun darbanii jiru.
Amajjii 30 bara 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti qorannoo laboraatoorii 1292 gaggeefameen namoonni 276 vaayirasii koronaan qabamuu, 1 vaayirasicha irraa dandamachuu fi 2 lubbuun darbbuu mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 263099 gaggeefameen namoonni 22899 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 20298 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 237 lubbuun darbanii jiru.
Amajjii 27, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti qorannoo laboraatoorii 291 gaggeefameen namoonni 48 vaayirasii koronaan kan qabamuu, 9 vaayirasicha irraa dandamachuu fi 2 immoo lubbun darbuun mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 261218 gaggeefameen namoonni 22503 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 20250 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 233 lubbuun darbanii jiru.
Amajjii 26, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti qorannoo laboraatoorii 444 gaggeefameen namoonni 110 vaayirasii koronaan kan qabamuu, 19 vaayirasicha irraa dandamachuu fi 1 immoo lubbun darbuun mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 260927 gaggeefameen namoonni 22455 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 20241 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 231 lubbuun darbanii jiru.
Amajjii 25, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti qorannoo laboraatoorii 362 gaggeefameen namoonni 58 vaayirasii koronaan kan qabamanii fi 19 immoo vaayirasicha irraa dandamachuun mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 260483 gaggeefameen namoonni 22345 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 20208 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 230 lubbuun darbanii jiru
Amajjii 24, 2013, akka naannoo Oromiyatti sa'atii 24 darbe keessaatti qorannoo laboraatoorii 267 gaggeefameen namoonni 68 vaayirasii koronaan kan qabamanii fi 18 immoo vaayirasicha irraa dandamachuun mirkanaa'e jira.
Hanga ammaatti, qorannoo laboraatoorii 260121 gaggeefameen namoonni 22287 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'uu, kanneen keessaa 20189 vaayirasicha irraa kan dandamatanii fi 230 lubbuun darbanii jiru.
4 December 202
3 December 202
2 December 202
20 Novmber 2020